Ma Ogtahay in Kenya ay dhabar-jab ku noqotay go’aankii Madaxweyne Farmaajo ee Kiiska badda? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ma Ogtahay in Kenya ay dhabar-jab ku noqotay go’aankii Madaxweyne Farmaajo ee...
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Xasan Cabdiqaadir Muudey ayaa dareen qiiro leh ku soo dhaweeyay khudbaddii qimaha laheyd ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo uu Khamiistii ka hor jeediyay Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimaha amniga, dhaqaalaha, bulshada, xiriirka dalalka deriska, hufnaanta maaliyadda, kiiska badda iyo doorka Somaliya ee gobolka, waxaana uu Madaxweynuhu iftiimiyay inaanay Somaliya wax gorgortan ahi ka geli doonin murunka ay Kenya gelisay Badda Somaliya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in Somaliya ay ku kalsoon tahay go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ, loona baahan yahay in laga warsugo go’aanka ay ka soo saari doonto kiiska badda.
Xasan C/qaadir Muudey oo ka falcelinaya khudbaddii Madaxweynaha ayaa yiri “Khudbadda Madaxweyne Farmaajo waxay ahayd mid taabatay dareenka shacabka Soomaaliyeed run ahaantii, go’aanka geesinimada lehna uu muujiyay waxay dhabar-jab ku tahay Kenya.”
Mar uu ka hadlayay damaca guracan ee Kenya ayuu yiri “Kenya waxay rabtay inay af gobaadsi ku xalaaleysato qayb ka mid ah Badda Somaliya, iyadoo leh wadahadal iyo is faham halagu xaliyo murunka badda, laakiin taas waxaa ka dhiidhiyay Madaxweynahayaga. Khudbadda Madaxweynaha wuxuu ku cadeeyay in xuduuda aan isu haysano Kenya laga warsugo natiijada ay ka soo saari doonto Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ee ICJ.”
Madaxweyne Farmaajo ayuu ku ammaanay go’aanka geesinimada leh ee uu qaatay, wuxuuna yiri “Waxaan ku ammaanaya Madaxweyne Farmaajo in ay ka go’an tahay in laga mira dhaliyo kiiska murunka badda ee sanadkii 2014 ay dowladdii hore horgeysay Maxkamadda The Hague, waana qabaa in xukunka u dhici doono dhinaca Somaliya.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waa waajib in aan si quman oo hufan ugu taageerno Madaxweyne Farmaajo iyo dowladiisaba waxyaabaha ay ku difaacayaan qadiyadeena barri iyo badba, qof kasta oo Soomaali dhab ahna sidaas buu qabaa.”
Muudey oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa bogaadiyay in la soo celiyo xiriirka labada dal ka dhaxeeya, bacdamaa ay wax badan wadaagaan. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayuu yiri “Midda kale waa muhiim in la soo celiyo xiriirkii Somaliya iyo Kenya. Waad aragteen Madaxweyne Farmaajo wuxuu khudbadda ku cadeeyay in Madaxweynaha Masar uu kulansiiyay isaga iyo Madaxweynaha Kenya, isla-markaana ay isu raaceen in xiriirka labada dal dib loo soo celiyo. Qodobkaasna waan soo dhaweynaya, maadaama labada dal ay wax badan wadaagaan, derisna ay yihiin.”
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee mucaarad iyo muxaafidba leh ayaa ka wada siman in laga wada dhiidhiyo in Kenya ay qaadato taako ka mid ah Badda Somaliya.
go’aankii Madaxweyne Farmaajo
Kenya ay dhabar-jab ku noqotay